Ny mpanamboatra sy ny mpanatram-bozaka eto Shina - Ny Cixi Wenap International Trading Co., Ltd.
Home > Products > Hydraulic Accessories > Fitaovam-pitaterana rantsan-tanana
Ireto manaraka ireto dia mikasika ny Fitaovam-pitaterana fanakambanam-batana mifandraika, manantena aho fa hanampy anao hahatakatra bebe kokoa ny Fitrandrahana Fitrandrahana Bite.
Adapters amin'ny tavoahangy miaraka amin'ny angidimby
Cixi Wenap International Trading Co., Ltd. dia mpamatsy vaovao ety anaty aterineto, fa manana traikefa momba ny fahaizana 5 taona mahery. Izahay dia manokana ho an'ny fiara fitaterana hosoka, rindrina, adapters, fifampikasohana, fitaovam-barotra vita amin'ny vy ary & amp; brass fittings. Manantena amim-pahatsorana izahay amin'ny fiaraha-miasa amim-pahatsoram-po miaraka aminao, mba hamoronana ny ho avinay mahafinaritra.
Lohahevitra amin'ny O Ring
Cixi Wenap International Trading Co., Ltd. dia mpamatsy vaovao ety anaty aterineto, fa manana traikefa momba ny fahaizana 5 taona mahery. Ny orinasa dia fikarohana sy famolavolana, famokarana, fivarotana ary famokarana fitaovana fitrandrahana hydraulique, ny famokarana haody famokarana hydraulic, ny fifandraisana amin'ny kofehy manangom-batana, ny vy tsy misy fangarony, ny vatom-pifamoivoizana baomba, ny fihodinan'ny rotary, ny fantsom-panafody, fiangonana. Manantena amim-pahatsorana izahay amin'ny fiaraha-miasa amim-pahatsoram-po miaraka aminao, mba hamoronana ny ho avinay mahafinaritra.
Mitotongana amin'ny kapila mangingina
Fiarovan-trondro mivantana na ankolaka
Hery na Elbow BSPT Male